Virtualbox: Si qoto dheer u ogow sida loo isticmaalo codsigan | Laga soo bilaabo Linux
Qoraalkan kama hadli doonno Waa maxay Virtualbox? Sidee loo rakibay Virtualbox? iyo Virtualbox muxuu soo celiyaa?, tan iyo dhowaan Blog waxaan uga hadalnay qodobbadan qoraalladan hore iyo kuwii dhawaa: "Ku rakib VirtualBox Ubuntu 18.04 LTS iyo waxyaabaha la mid ah" y «Nooca cusub ee VirtualBox 6.0 oo wata horumarin cusub ayaa horay loo sii daayay».
Daabacaaddan waxaan si kooban uga hadli doonnaa qaar ka mid ah "talooyin" iyo qaar ka mid ah "talooyin waxtar leh" si aad uga sii waxtar badan uguna wax ku oolsan adeegsiga aaladan Nidaamyada Nidaamka Hawlgallada.Taasi waa, waxay si buuxda u xakameyn karaan isticmaalka VirtualBox, oo ay go'aansadaan inay u adeegsadaan qalab tayo sare leh oo faa'iido u leh gurigooda ama howlaha OS Virtualization hawlaha
2 Qaab dhismeedka dhabta ah
3 Talooyin iyo talooyin waxtar leh
3.1 Qeybta Guud
3.2 Qaybta Nidaamka
3.3 Qaybta Muuqaalka
3.4 Qaybta Kaydinta
3.5 Qaybta Maqalka
3.6 Qaybta Shabakadda
3.7 Qeybaha Dekedaha Serial
3.8 Qaybta USB
3.9 Qaybaha fayl wadaagga ah
3.10 Qaybta Wajahadda Isticmaalaha
Xusuusnow in VirtualBox uu yahay nooc 2 nooc oo isku-dhafan Hypervisor, taasi waa, waa in la fuliyaa oo kaliya lagu rakibi karaa (lagu rakibi karaa) Marti-bixiye kasta (Kumbuyuutar) nooc kasta oo hadda jira ama duug ah ee Windows, Linux, Macintosh, Solaris, OpenSolaris, OS / 2 iyo OpenBSD Operating Systems.
Taasina hadda waxay leedahay wareeg horumarineed oo isdaba-joog ah oo horumar leh oo si joogto ah loo sii daayo, taas oo ka dhigaysa bedel aad u fiican xalalka kale ee la midka ah, laakiin leh tiro aad u qaddarin badan oo ah astaamaha iyo shaqooyinka, nidaamyada hawlgalka martida ee iswaafajinaya iyo barnaamijyada ay ku socon karto.
Waqtigan xaadirka ah Virtualbox qaabkeeda hadda, 6.0, waxay leedahay qaybaha soo socda iyo xulashooyinka ku yaal baalka menu-ka ee websaydhkeeda:
Qaybtani waxay ku urursan tahay dhammaan astaamaha dalabka taas oo iyaduna si ficil ah u maamusha dhammaan howlaha muhiimka ah ee arjiga, sida: Jidka kaydinta (Folders Default) ee feylasha macquulka ah ee VM ee loo isticmaalo "Maktabadaha Xaqiijinta VRDP" ee ay adeegsato VirtualBox si ay awood ugu yeelato inay noqoto "RDP Server".
Marka lagu daro kala-soocida jihooyinka kumbuyuutarka si aad uga faa'iideysato iyada oo loo marayo kumbuyuutarka, barnaamij u sameynta xilliyada cusbooneysiinta iyo qaabka ay tahay, iyadoo la qeexayo luqadda isku-xirka garaafka ama sida ay u ekaan doonto (cabirka iyo qaabka ) kormeeraha (yada), iyo kuwo kale oo badan. Halkan waxa loo qaabeeyey waxay noqon karaan labadaba arjiga guud ahaan, iyo gaar ahaan VM-yada.
Fursadaha halkan lagu soo ururiyey waa kuwan soo socda:
Doorbidyada (Guud / Galid / Cusbooneysiin / Luuqad / Muujin / Shabakad / Kordhin / Wakiil)
Soo Deji Adeeg Fudud
Dhoofinta Adeeg Farsamo
Maamulaha: Warbaahinta Fudud / Shabakada Martigeliyaha / Macluumaadka Daruuraha / Hawlgallada Shabakada / Cusbooneysiinta
Dib u deji dhammaan digniinta
Ka bax codsiga
Qaybtani Liistu waxay asal ahaan ka hadlaysaa wax kasta oo la xidhiidha abuurista ama maaraynta VM-yada la maareeyey. Qeybaha hoose ee ay leeyihiin waa kuwan soosocda:
Abuur Mashiinka Farsamada ee Cusub
Kudar Mashiinka Farsamada ee jira
Qaybtani Liistada waxay siisaa marin dhammaan macluumaadka, dukumintiyada iyo taageerada dalabka. Fursadaha marin u helka ee la heli karo ayaa loo kala jaray qaybaha hoose ee soo socda:
Waxyaabaha ku jira Liistada Isticmaalaha maxalliga ah
Booqo bogga rasmiga ah
Baadh qaybta Bugtracker ee bogga rasmiga ah
Gali bogga rasmiga ah ee bogga
Muuji Daaqad «Ku saabsan Virtualbox»
Talooyin iyo talooyin waxtar leh
Tilmaamaha iyo talada soo socota ee lagu fulinayo VirtualBox waa wax aan ka badneyn talooyin taxane ah goobaha shaqsiyeed ee shaqsiyeed ee uu qof kastaa ku samayn karo MV-ga ay ka tirsan yihiin iyada oo loo marayo qaybta "Faylka / Xulashooyinka" ee ku yaal baarka menu. Marka dib-u-habeyntaan waxaa loo raaci karaa warqadda ama la qabsan karaa baahiyaha Shaqaalle, Koox ama Urur kasta.
Qaybtaan waxaan ku haynaa 4 tab oo aad ku qaban karto howlaha soo socda:
Aasaasi ah: Beddel magaca VM, nooca OS iyo nuqulkiisa.
Hormarsan: Xullo galka caga-dhigashada shaashadda aan ka badbaadinno VM-yada.
Tilmaanta: Abaabul, qor faahfaahin, iyo sharaxaadaha ku saabsan isticmaalka ama waxyaabaha lagu sameynayo VM-ga kala duwan.
Qarsoodi Disk: Awoodi sirta faylka VM Virtual Hard Drive.
Qeybtaan taladu waa: Awoodi ama ha awoodin, isticmaalka saxda ah ee sabuuradda iyo sirta.
Qaybtaan waxaan ku haynaa 3 tab oo aad ku qaban karto howlaha soo socda:
Saxanka salka: Dheellitir xusuusta aasaasiga ah, taas oo ah, RAM-ka aan dooneyno inaan u dhigno MV, iyo waxyaabo kale.
Processor: Samee adeegsi dhab ah ama wax ku ool ah tikniyoolajiyad wax ku ool ah oo loogu talagalay qeybaha CPU, iyo waxyaabo kale.
Dardargelinta: Xulo nooca iskuxirka garaafka si aad u isticmaasho, oo aad awood u siiso ama aadan u dookhyada dardargelinta.
Qeybtaan taladu waa: Dooro wax yar oo ka badan xaddiga RAM / CPU Cores oo lagama maarmaan ah ama la xisaabiyo haddii loo baahdo si looga fogaado qaboojinta ama hoos u dhaca VM, oo doorbid inaad ku haysato PAE / NX iyo VT-x / AMD-V inay ku shaqeeyaan VM-yada ku dayashada kombiyuutarada casriga ah .
Shaashadda: Isku hagaaji qadarka xusuusta fiidiyaha.
Shaashad fog: Ku sahlo xulashooyinka isku xirnaanta fog VM-ka.
Muuqaal Video ah: U oggolow fursadaha qabashada fiidiyaha MV-ga.
Qeybtaan taladu waa: U qoondee inta ugu badan ee Xusuusta Video-ga ah isla markaana hayso 3D Acceleration oo awood u leh si loo ilaaliyo waxqabadka VM ee aadka u wanaagsan.
Si loo maareeyo ilaha keydinta VM loona maareeyo makiinadaha muuqaalka dhijitaalka ah.
Qeybtaan taladu waa: U qoondee xaddiga ugu sarreeya ee meel macquul ah (GB) Disk Virtual la doorbidayo oo lagu abuuray qaabka "Cabbirka si xaddidan loo qoondeeyey" halkii laga siin lahaa "Cabbirka go'an" si loo ilaaliyo waxqabadka wanaagsan iyo madaxa koritaanka wanaagsan ee VM.
Si loo habeeyo codka iyo soo saarida MV.
Qeybtaan ma jiraan wax talo bixin ah: gaar ah ama gaar ah oo ku saabsan.
Si loo habeeyo isku xirnaanta shabakadda VM.
Waxay leedahay 2 ikhtiyaar oo muhiim ah oo la isku hagaajin karo. Wicitaanka ugu horeeya ee ah “Connected” oo muujinaya waxyaalaha soo socda ee lagu xusho lana isticmaalo: Kuma xirna, NAT, Shabakadda NAT, Buugga Adapter, Shabakadda Gudaha, Martiqaadka Keliya Adapter, iyo Maamulaha Guud. Iyo wicitaanka labaad ee «Horukaca» waxaan u qaabeyn karnaa si ka duwan, xuduudaha soo socda oo ah: Nooca Adabtarada, Qaabka Fudud, Cinwaanka MAC, iyo Kabka isku xiran.
Qeybtaan taladu waa: Xullo isku-darka habboon ee xuduudaha "Iskuxira" iyo "Horukacsan" si aad uga fogaato isku xirnaanta xun iyo cilladaha amniga ee aan loo baahnayn.
Qeybaha Dekedaha Serial
Si loo habeeyo kaararka Port Serial ee MV.
Si aad ugu habayso Qalabka kujira USB Ports-ka VM-ka.
Qaybaha fayl wadaagga ah
Si aad ugu habayso faylalka la wadaago VM-ka dhexdiisa.
Qeybtaan taladu waa: Dhig, sida ugu macquulsan, Fayl Wadaag ah oo tilmaamaya Computer-ka dhabta ah (Marti-geliyaha martida loo yahay) si loo fududeeyo is-weydaarsiga / ilaalinta xogta dhexdooda.
Qaybta Wajahadda Isticmaalaha
Si aad u qaabeysid waxa ku jira iyo soo bandhigida miiska Virtualbox Menu ee MV kasta.
Virtualbox waa codsi si ballaaran loo isticmaalo sababo la xiriira isdhexgalka saaxiibtinimo, rakibidda fudud iyo shaqeynta ballaaran. Si kastaba ha noqotee, sida dhammaan Teknolojiyada Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamyada, waxay leedahay ikhtiyaarro badan, astaamo iyo howlo ay tahay in la barto si ay u bartaan. Sidaa darteed, waxaan rajeyneynaa in qoraalkani kaa caawin doono inaad dhammaystirto oo aad xoojiso aqoonta jirta ee ku saabsan Virtualbox.
Haddii aad qabtid su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan mowduucan, waxaan kugula talinayaa inaad aqriso warqadda shaqada ee la xiriirta tan laga helay isku xirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Virtualbox: Si qoto dheer u ogow sida loo adeegsado codsigan
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aan ku isticmaali karo websaydhkayga http://ventatpv.com
Ku jawaab ventatpv
Haddii aad u jeeddo in haddii aad ku dhejin karto webka la yiraahdo 'Server Server' oo leh VirtualBox, markaa dabcan waxaad sameyn doontaa… Aad ayay u badan tahay boqolkiiba wanaagsan ee shabakadda inay ku socoto MV.
Spygate: Linspire ayaa la socota ...